प्रदिप र बिशालका छिमेकीले यस्तो रहस्य – हेर्नुहोस भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रदिप र बिशालका छिमेकीले यस्तो रहस्य – हेर्नुहोस भिडियो सहित
प्रदिप र बिशालका छिमेकीले यस्तो रहस्य – हेर्नुहोस भिडियो सहित
admin December 10, 2018 समाचार	0
काठमडौँ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार एवम् हत्यामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले कञ्चनपुरस्थित भगतपुरका प्रदिप रावललाई नियन्त्रणमा लियो । मंगलबार काठमाडौंबाट प्रहरील प्रदिपलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रदिपले दिएको बयानकै आधारमा कञ्चनपुरबाट थप दुई युवाः विशाल र दिनेश चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
संयुक्त बयानमा प्रदीप र विशालले अपराध स्वीकारेको भनियो । घटनामा संलग्न नभएको निष्कर्षसहित दिनेशलाई घर पठाइयो । थप पुष्टिका लागि प्रदिप र विशालको डिएनए परीक्षण भइरहेको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, प्रहरीले अघोषित रुपमा उनीहरु नै अपराधी भएको दाबी गरेको छ । तर, निर्मलाको बलात्कार एवं हत्या भएको दिन अर्थात् साउन १० गते उनीहरु प्रहरी हिरासतमै भएको बताइएको छ । यसबारे बुझ्न हामी प्रदिप र विशलको घरमा पुगेका छौं ।
परिवार र छिमेकीको कुरालाई आधार मान्ने हो भने प्रदिप र बिशालले निर्मलाको बलात्कार एमव् हत्या गरेका होइनन् । प्रहरी अनुसन्धान भन निर्मलाको हत्या उनीहरुले नै गरेको भन्ने निष्कर्ष नजिक पुगेको छ । यसले प्रहरीप्रति झन् शंका बढाएको छ । कतै प्रदिप र विशालले पनि दिलिपसिंह विष्टकै नियति भोग्नु्पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, प्रहरी अनुसन्धान सही हुन पनि सक्छ ।
गल्तीमाथि गल्ती गरेकै कारण प्रहरीले जनविश्वास गुमाउँदो छ । ‘निर्मला पन्त हत्या प्रकरण’मा सरकार एवम् प्रहरी प्रशासनले गरेका खासखास गल्ती यस्तो छ, जसले प्रहरीमाथि विश्वास घटायो !
१. सुरुमै प्रहरीले घटनालाई नजर अन्दाज गर्नु २. उजुरी लिन आनाकानी गर्नु ३. प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गर्नु ४. प्रहरीले मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्तिलाई अभियुक्त भनेर सार्वजनिक गर्नु ५. प्रहरी प्रमुखले आफ्नै संगठनप्रति विश्वास नलाग्नु ६. सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रहरी अधिकारी बर्खास्थ गर्नु ७. गृहमन्त्री घटनाप्रति संवेदनशील नहुनु ८. प्रधानमन्त्रीले घटनालाई राजनीतिक हिसाबमा सोच्नु ९. अनुभवहीन निजामती कर्मचारीलाई छानबिनको जिम्मा दिनु १०. न्यायका लागि भएको आन्दोलनमा प्रहरी दमन हुनु
यसरी सरकार एवम् प्रहरी प्रशासनले गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेको छ । प्रहरी वास्तविक दोषि नै पत्ता लगाए पनि नागरिक प्रहरीलाई विश्वास गर्न नसक्नु दुखद कुरा हो । निर्मला हत्या प्रकरणबाट सिक्दै प्रहरीले जनविश्वास जित्न सकोस् ।
भागरथीका परिवार भेट्न जाँदा जब दिनेशले यस्तो भन्दै धरधरी रोए…
प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञहरूको लकडाउन सम्बन्धी यस्तो सुझाव! के हाेला त अब लकडाउन?
को होलान उनि कञ्चनपुरको महाकाली नदिमा बे वा रिसे अव स्थामा पुरुषको श व फेला